FADLAN KOR U HAY!!! Maqaal ku sabsan kulanka Faysal iyo Farmaajo - www.dhanbaalnews.com
FADLAN KOR U HAY!!! Maqaal ku sabsan kulanka Faysal iyo Farmaajo
FADLAN KOR U HAY
Shaki kuma jiro inuu Faysal Cali Xuseen yahay hogaamiye ka fog xumaan badan oo ay maanta leeyihiin hogaamiyaasha u dhigma ee ku nool gebi ahaanba geyiga somalida, gaar ahaan Somaliland. Hadaba anigoo ka duulaya taageeradayda aan kala go’a lahayn ee aan u hayo, waxa mar walba marag ma doon ah in uu Faysal yahay qof ibnu Adam ah oo marmar uu qalad ka dhici karo, ayna haboon tahay in mar walba kuwa hareera jooga ay ku biiriyaan talo iyo tusaale uu kaga leexdo qaladka sahlan ee sida ula kaca ah marmar u galo. Nasiib daro, kuwaasi waa ay gabeen shaqadoodii ay ku odhan lahaayeen ka joog, waxaana marag ma doon ah in qaladkii guddomiyahu iska daba imanayo.
Nin philosopher ahaa ayaa waxa laga soo wariyey inuu yidhi “ Ibnu-aadamku maba qaldamaan, haddii ay dhacdana waxa qaldama nin waayey cid u kala sheegta wadada saxda ah iyo ta qaladka ah“ . Qofka marmar ayay maskaxdiisu tusi kartaa inuu saxan yahay isagoo ay indhaha dadka kale oo dhamina u arkaan inuu qaldan yahay, sidaas ayaanay talo guud oo lagu socdaa u tahay muhiim markay ay ummaadi meel ku wada nooshahay, ee waliba tallaabooyinka uu qofkaasi qaadayaana tahay mid caam ah oo la wada leeyahay, ee aanay ku koobnayn mid shakhsi oo qofkaasi laga hadlayaa uu gaar u leeyahay.
Faisal Cali, cadawgiisa dhabta ahi waa kuwa ku hareeraysan ee ugu dhawdhaw, lagana yaabaa in marmar aan aniga laftaydu soo gelaayo kuwaa aan tilmaamay, sababtoo ah waxay marmar isku garab taagaan qalad qaran iyo mid guud oo faysal si ula kac ah u sameeyo, waxay saaxiibadaasi u bateen wax kastoo qalad ah oo ka yimaada inay u tumaan sacabka iyagoo ujeedadooda ugu weyni tahay inay wax ku yeelaan kuwa dhaliila Faysal. Nasiib daro, taageeradaas guracani waxay guddoomiyaha horena u guddonsiisay inuu noqdo mid guud ahaan shacabka wadanku aanay ugu haynin wanaag badan, kuna qeexaan inuu yahay nin aan hanan karin hogaankooda.
Faysal Cali Xuseen, oo ka qayb galay doorashadii ay jeegaantu boobtay ee ka dhacday wadanka 2017kii, waxay shacabka Somaliland u muujiyeen halka ay ka taagan yihiin isagoo ku guuleystay 4% dhamaan codadkii la dhiibtay. boqolkiiba tiro badan ayuu hoos ugu soo dhacay marka loo eego tii taa ka horeysay, oo uu iyada lafteeda ahaa musharaxii ugu codka hooseeyay.Xaga ale, markaad eegto, tirada xildhibinaada golaha wakiilada iyo kuwa dawladaha hoose ee ka soo baxay xisbiga UCID, dhamaan wadankoo dhan way ka wareegeen xisbiga oo meel lagu fadhiyaa ma jirto maanta xisbiga UCID.
Ugu dambayn, arinta todobaadkii dhawayd ka dhacday wadanka Belgium, waxuu Faysal go’aansaday inuu la kulmo Madaxweynaha Federalka Soomaliya, oo u joogay wadankaa shir muhiim ah oo arrimaha Somaliya lagaga wada hadlaayey, u malayn maayo in kulankaasi ku yimid talo uu Faisal la yeeshay cid kale ee waxay ahayd mid isaga maskaxdiisa uun ka timid, mararka qaarkoodna go’aanada caynkaasi waxay keenaan in aad ku weydo intii hore kuula socotay qaar ka mid ah, halka ay ahayd inaad sare uga kacdo halkii aad taagnayd markaad ogaatay halka ay dadku kaa taagan yihiin (Doorashadii), nasiib daro guddoomiyahu muu eegin arintaa waxaana uu u badheedhay wax loo yaqaano „Political Suicide“.
Arinta kale ee tixgelinteeda lihi waxay ahayd in talaabada uu guddoomiyahu qaaday ay ahayd uu ogaa halka ay shacabka wadanku ka taagan yihiin in dawlad Somaliyeed madaxdeeda lala kulmo si badheedh ah iyo si qarsoon, taasoo keeni karta in ay furi karto wado aan la mahdin doonin. Hore waxa loogu eedeeyay dad badan oo sharaf leh oo xitaa doorasho ku jiray, inay Somali la kulmaan kuwaasoo, xitaa soo gaadhay in qabaa’il dhan lagu shaambadeeyo inay wax shacabkani leeyihiin ay gaar u lumiyaan, waxaanay arintaasi xitaa sababi gaadhay isku dhac reereed oo shacabka ah.
Ugu dambayn, taageerayaasha Guddoomiye Faisal waxa nala gudboon inaanu wadanka dan ka yeelano, guddomiyahana ka qabano qaladaaka qaran ee aanu isagu ka tallaalayn waxa dadka kaleba lagu haysto. Teeda kale, guddoomiye Faysal waxa la gudboon inuu xisbigii UCID ku soo celiyo xisbinimadii oo dhismihiisii bilaabo, isaguna uu ku tooso in kuwan ugu dhawdhawi ay yihiin cadaw doonaya inay saaxada siyaasada odayga ka tuuraan, waxa la gaadhay xiligii uu faysal cali waraabe ku toosi lahaa halka sartu ka qudhuntay, oo ah kuwa u muujiya taageerada joogtada ah.